Hevitra manodidina ny 29 Martsa | GAZETY_ADALADALA
Hevitra manodidina ny 29 Martsa
Posted on 29/03/2014 by gazetyavylavitra
Fanontaniana no nentin’i Ony Rambelo nanokatra ny fanehoankeviny momba ny fety sy fankalazana ny andro 29 Martsa ataon’ny taranaka ankehitriny. Toy ny fanehankevitra rehetra ihany no amoahantska azy eto, fa anjaran’ny tsirairay mamaky no maka na tia izay fmba fijery tandrify azy.
Hoy indrindra izy:
Diso ve ny tantara?
Hotakotaka no niainan’ny malagasy rehetra niaina ny 29 martsa taona 47.Tondro-molotra mahafaty no nitranga tamin’izany. Mpikomy no anarana niantsoana ireo niana-kendry nitaky ny fahaleovantenan’I Madagasikara mba hiverenany hiaina izany indray. Tsy ny hoe hamono tena amin’ny tsy antony akory no nanesika ny ankabeazan’ireo mpikomy ireo, fa misy antony tena naharesy lahatra azy tany anatiny tany…ary tsy tongatonga ho azy fa nisy hatrany ireo nanohitra ny fanjakana mpanjanaka teto hatrany ampiandohany mihitsy. Matoa famonoan’olona marobe tsy hita isa no nitranga tamin’iny fikomiana iny dia tao raha, tao ny fomba fijery samy hafa tsy nitovizana ka nahatonga ny faharesena sy ny tsy fahombiazana.
Raha ny tokony ho izy dia tsy misy antony tokony hahatsiarovana ity datin’ny FIKOMIANA ity. Resy anie ny Malagasy tamin’io andro mainty teo amin’ny tantarany io e! Ny mpanjana-tany no nifaly sy nitoto rebika tamin’izany faharesena izany, ary nahomby ny fampiasany ireo malagasy nahazo tombony manokana tamin’ny fanjakana tamin’izany ka sahy “nanontsana” ireo mpiray rà aminy. Faty olona mikararàna ny tao anaty lamasinina, ny tany amoron-dramomasina rehetra tany, ny fandoroana trano , ny fametavetana, ny teny ratsy maharary marobe natao nandrabirabiana sy nanafokàna ireo nipelipelika tsy nanaiky ny fanjanahana.. Dia izany ve no hotsaroantsika ankehitriny? Ho tsaroana dia hitondra inona? Mandraka ity ny anio dia mbola tsy niala tsiny tamin’ny malagasy noho ny famonon’olona nigagan’izao tontolo izao iny ny fanjakana Frantsay .Verivery maina izany ny rà latsaka teto? Fanahy iniana nodisoina ny tantarantsika Malagasy teto ka nahatonga antsika ho very hasina sy tsy manana ny maha izy azy antsika satria tsy fantatry ny taranaka ankehitriny ny tena zavamisy marina sy ny tena antom-pisian’ny fikomiana tamin’izany taona 47 izany. Ireo be tati-bolana sy nitorotoroka tamin’ny fanjakana ny fisian’io fikomiana io no nandresy sy nahomby, ka izy ireo ve tokony hifaly sy hifetifety rehefa tonga ny vanim-potoana toa izao? Tsaroana etoana fa fifaliana sy hoby ary dihy no nameno ny tanàna tamin’ny fahadimampolo taonan’io fikomiana io, ary dia fanilo miampita hono e! Firenena resy ve dia hobiana sy handihizana e!
Ankehitriny dia tonga indray ny fijery samihafa eo amin’ny tontolo politika malagasy ary tsy misy maritoerana (répère) tena azo ijoroana sy hanamarinana ny tantarany intsony ny firenena malagasy..Entin’ny fanatontoloana sy ny fitsokan’ny rivotry ny fahefan’ny matanjaka ara-toekarena ny fikorian’ny hevitra eto. Fahatsiarovana ny vanipotoana toy izao ary tokony ho fisaonana sy fandinihan-tena. Ary tokony hangina izay minia mandiso ny tantara ka tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany manokana..Ho tsarain’ny tantara e!, aoka ny tantara no hitsara e! Fa tantara inona anefa no resahana amin’io e? Ny vahoaka Malagasy tokoa ve no nanao ny tantarany sy niaina ny tantarany hatramin’izay? Sa notefena fotsiny izy hanaraka sy hiaina ny tantara efa tsy maintsy hizorany? Ohatra an’ireny tantara ataon’ny ankizivavy kely amin’ny vato ireny e!
Filed under: ady sy fifandirana, anao ny fitenenana, fandriampahalemana, fifandraisana iraisam-pirenena, politika, tapatapany | Tagged: #29mars, #fikomiana, #Moramanga, #ony_rambelo, Madagasikara |
« Haute Responsabilité à l’administration du BCMM Safidy sy « Choix » dia Vazaha, hono, izy »